UMengameli waseZimbabwe uphakamise elobumbano namaqembu aphikisayo | News24
UMengameli waseZimbabwe uphakamise elobumbano namaqembu aphikisayo
Harare - Abantu baseZimbabwe kumele babeke ipolitiki eceleni basebenze ngokubambisana ukuze kuvuselelwe izwe futhi likwazi ukusebenzisana namanye amazwe omhlaba,” kusho u-Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ethula inkulumo yakhe yokuqala njengoMengameli wezwe.
UMnangagwa usole ubuntekenteke kanye nokungacaci kahle kwibomgomo eyabekwa ngumholi waphambilini uRobert Mugabe.
Lo mengameli uthembise izakhamuzi ukuthi luzoqhubeka ngokuhleliwe ukhetho lwangonyaka ozayo.
Yize esekhethiwe uMengameli omusha waseZimbabwe, kusekude phambili njengoba leli lizwe kumele lisebenze kanzima ukuze litakulwe futhi sithuthuke nesimo somnotho.
OLUNYE UDABA:Wakhala izinyembezi ehla esikhundleni uMugabe
Ngale kwalokho, iqembu elibusayo iZanu-PF libhekene nenye inselelo njengoba izakhamuzi, ikakhulukazi ezasemakhaya zifuna uhulumeni omusha aqinisekise ukuphepha kukaMugabe.
Lezi zakhamuzi zithi ziyalwamukela ushintsho futhi zinethemba lokuthi nempilo izokuba ngcono kodwa bafuna kuqinisekiswe ukuphepha kukamengameli osanda kusula esikhundleni, uma kungenzeki lokho, bazovota namaqembu aphikisayo.
“Asithokozile, kodwa futhi asikhali kakhulu ngoba ushintsho luyadingeka. Sekuyisikhathi sokuthi samukele ubuholi obusha ngethemba lokuthi impilo izakuba ngcono,” kusho isakhamuzi esicele abeCity Press bengalishicileli igama lakhe.